शेरचनसहित एमाओवादीको घरदैलो तीव्र | चितवन पोष्ट दैनिक
शेरचनसहित एमाओवादीको घरदैलो तीव्र
२०७० कार्तिक २३, शनिबार ००:५४ गते
नारायणगढ । आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनको लागि एमाओवादी चितवनले जिल्लाभर आप्mनो चुनावी प्रचारप्रसार एवम् घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ । एमाओवादीका क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार यमबहादुर परियारलाई विजयी गराउन गाउँका प्रत्येक वडामा पुगी भोट मागेका छन् । सोही अवसरमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार सिंहबहादुर गोलेले पनि जनताको घरदैलोमा पुगेर भोट मागेका थिए । अभियानअन्र्तगत खैरहनी र पिप्लेमा अन्तक्र्रिया, छलफल तथा घरदैलो गरी परियारले पहिचानसहितको संघीयता स्थापित गराउन एमाओवादीलाई विजयी गराउन आग्रह गरे ।
यस्तै, एमाओवादी निर्वाचन क्षेत्र नंं. २ ले पनि चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएको छ । एमाओवादीले घरदैलो, कोणसभा, अन्तक्र्रियालाई तीव्र पारेको एमाओवादी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ की प्रचारप्रसार संयोजक तथा समानुपातिकतर्फकी उम्मेदवार संगिता भट्टराइले जनाइन् । पिठुवाको धु्रवचोकबाट सुरु भएको घरदैलो अभियानका क्रममा जनताको घरदैलो, खेत–खेतमा पुगेर एमाओवादी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार रमेश रेग्मी अमर र संगिता भट्टराईले भोट मागेका थिए ।
यस्तै, एमाओवादी क्षेत्र नं. ३ ले चुनावी प्रचारप्रसार र घरदैलो कार्यक्रमअन्तर्गत भरतपुर नगरपालिका र कविलास गाविसमा घरदैलो कार्यक्रम गरेको छ । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमतले जिताउन हँसिया हथौडामा भोट हाल्न एमाओवादी चितवन क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार नारायणप्रसाद दाहालले जनतासँग आग्रह गरे । यसैबीच क्षेत्र नं. ३ को कविलास गाविसको दासढुङ्गामा नेपाली काँग्रेसका वृद्धिबहादुर गुरुङसहित १० जना र वीरबहादुर तमाङसहित १५ जना एमाओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरु सबैलाई क्षेत्र ३ का उम्मेदवार नारायण दाहालले रातो टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
यता, एमाओवादी निर्वाचन क्षेत्र नंं. ४ को घरदैलो अभियानअन्तर्गत शिवनगरमा एमाओवादीका उम्मेदवार चित्रबहादुर श्रेष्ठले मतदाताहरुलाई सम्बोधन गर्दै पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानलाई जोड दिई आगामी निर्वाचनमा आप्mनो पार्टीले बहुमत ल्याए गरिबी र सुकुम्बासीको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
एमाओवादीले दोस्रो चरणको चुनावी प्रचारप्रसार अभियानअन्तर्गत चितवन क्षेत्र नं ५ को पार्वतीपुर गाविसमा एमाओवादीका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य तथा उम्मेदवार अमिक शेरचनसहितको टोलीले घरदैलो गरेको छ । माडी क्षेत्रका बघौडा गाविस वडा नंं ९ छरछरे, राधापुर, रमाइलो डाँडा र नयाँ पिपरियामा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । स्थानीयले चोक–चोकमा कलस राखेर फूलमाला र अबिरले स्वागत गरेका छन् । घरदैलो बसन्तपुरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य प्रेम रिमाल, वाईसीएल नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरि भुषाल, राज्य समिति सदस्य प्रभुप्रसाद महतो, निरा क्षेत्रीलगायतका नेता, कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको संचार ब्युरो सदस्य किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।